Çorum wuxuu la kulmay mukhtarsada xaafada AK Party kuxigeenka Kavuncu Kavuncu, Kirikkale Corum, Corum Merzifon, Merzifon Samsun khadka tareenka xawaaraha sare ee sanadka 2021, ayaa sheegay in toogashadii ugu horeeysay la toogtay. Baahida garoonka diyaaradaha ee Çorum [More ...]
Qiimaha Tikidhada East Express 2020: Gaar ahaan caan ku ah dhalinyarada, East Express waxay ka tagtaa Ankara waxayna gaartaa Kars oo ka timaadaa Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan iyo Erzurum. 5 - 10 daqiiqo saldhigyada dhexe [More ...]
saaraha ugu weyn ee Turkiga ee dhismaha la deggan yahay oo ku yaalla inta u dhaxaysa DAP ee, tusaale ahaan, warshadaha ayaa gaaray horumar degdeg ah a. DAP, oo sii wadi doonta taageeradeeda dhaqaalaha Turkiga iyada oo gaariga gudaha lagu soo bandhigay xaflad aad u wanaagsan [More ...]
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktas, gaariga maxalliga ah iyo kan qaran waxaa lagu soo saari doonaa xubnaha saxaafadda ee Gemlik'te ayaa bayaan ay soo saareen. Bursa, iyadoo go’aanka laga soo saaray uu noqon doono saldhigga wax soo saarka ee gaariga madaxweynaha iyo kan korontada [More ...]
Natiijooyinka shaqaalaysiinta 420 shaqaale qandaraas la leh IMM ayaa la shaaciyay. Ardayda qalin jebisay ee murashaxiinta ku taxan marka loo eego heerka qalin-jabinta, waxaa lagu go'aamiyay maaddo ahaan imtixaan afka ah inta u dhaxaysa Diseembar 20-26. Qaab dhismeedka Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) [More ...]
Dadka degan xaafada Baklalı ee Arnavutköy, oo daadadku yeelan doonaan haddii khadku ka dhaco Istanbul, ayaa ka walaacsan gaadiidka xabaasha. Dadka intiisa badani kuma qanacsanahay in qabuuraha agagaaraha mashruuca ee Kanal Istanbul la dhaqaajin doono. Weyn Istanbul [More ...]
Sivas Cumhuriyet University Kuliyadda Dhaqaalaha iyo Maamulka Sayniska Qaybta cilmiga dhaqaalaha. Dr. Ahmet Şengönül wuxuu yiri, Sivas Iyadoo leh Xawaare Xawaare Sare ah, Sivas waxay noqon doontaa xarun dalxiis isla markaana dhaqaalaha magaaladu wuxuu noqon doonaa 14 boqolkiiba. [More ...]